Suurtagal Ma Tahay Inaad Ka Soo rarto Sawirada Instagram Kombiyuutarka? Baro Sida Loo Sameeyo ▷ ➡️ Kuwa Raacaya ▷ ➡️
Instagram Shabakadaha Bulshada Kuwa raacaya
Suuragal ma tahay in kombuyutarka laga soo dejiyo sawirrada Instagram-ka? Baro sida loo sameeyo.
July 8, 2019 0 comments 995
Instagram waa mid ka mid ah codsiyada ugu caansan adduunka oo dhan, halkaas oo dadka intiisa badani ay maalin walba daabacaan malaayiin sawirro ah. Isticmaalkeeda ayaa u gaar ah dalabka Android, Si kastaba ha noqotee, waa suurtagal in la ogaado sida loo soo geliyo sawirrada 'Instagram' ee laga helo PC.
Tani waa mid aad u faa'iido badan, marka aad maamusho shabakadahaaga bulshada kombuyuutarkaaga, ama aad si fudud uga dhammaato mobiilkaaga. Xaqiiqdii, waxa la qabtay ayaa ah in la khiyaaneeyo kombuyuutarka adoo aaminsan in aan ka daabacno arjiga. In kasta oo howshu u muuqato inay adagtahay, hadana waxay noqotey mid aad u fudud.
Sii wad aqriska qoraalkeena waxaadna ogaan doontaa qaababka kala duwan ee loo daabaco Sawirro Instagram laga soo qaaday kombiyuutarka.
Sida sawiro looga soo guro Google Chrome
U adeegsiga Google Chrome biraawsar, iyo gelinta sawirradaada Instagram waa wax fudud. Si tan loo sameeyo, raac tallaabooyinka hoose:
Fur biraawsarka Ku bilow adoo furaha furaha furaha isla markaana gujinaya meelkasta oo ku taal bogga biraawsarka bog furaha midig ah. Xulo "Baadhitaan" si aad u furto horumiyaha.
U beddelo nooca mobilada. Guji batoonka laba-labalaha ah ee laga helay bar-bar xulashada "Beddel Qalabka Qalabka" bar.
Soo gal sawirro Markaad firfircoontahay ikhtiyaarka mobiilka biraawsarka, waxaad bilaabi kartaa daabacida sawirradaada calaamada kamaradda. Haddii aad gujiso, faylka baaraha ayaa furi doona oo waad dooran kartaa kan aad rabto ka dibna waad gelisaa.
Sidee looga sawiraa sawirrada Mozilla Firefox?
Iyada oo la adeegsanayo Mozilla Firefox, howshu way ka duwan tahay. Marka xigta, waxaan ku tusayaa maxay yihiin tillaabooyinka la raaco:
Ku rakib Add-on In Mozilla Firefox waxaa looga baahan yahay in lagu rakibo kudar, taas oo lagama maarmaan u ah in la beddelo qaabka nooca mobilada. Plugin waa "User Agent Overrider".
Xulo kordhinta. Waxaad ka heli kartaa kordhinta sanduuqa saxda ah. Guji calaamadda oo aaladihii kala duwanaa ayaa soo muuqan doona, xulo “iOS / Safari 10”.
Bog bogsii oo sawiro geli. Dib u qabooji bogga si aad u bilowdo inaad muujiso nooca mobilada. Waxaad isticmaali kartaa astaamaha Instagram ee kala duwan ee bogga hoose. Kadib waxaad bilaabi kartaa inaad geliso sawirada adoo taabanaya calaamada kamarada.
Sida loo sawiro Safari?
Arinta Safari waxaad u adeegsan doontaa qaab kale, waana kuwan talaabooyinka:
Ku dadaal "Wakiilka Adeegga". Si aad u isticmaasho nooca mobiilka ee biraawsarkan, waa inaad guji "hormarinta", ka dibna dooro "Wakiilka Adeegga". Ku xigta, waa inaad doorataa nooca kumbuyuutarka ee loo baahan yahay "Safari - iOS 10 - iPhone".
Muuqaalka IPhone. Kadib xulashada nooca biraawsarka, waxaad heli doontaa aragtida iPhone ee loogu talagalay Instagram. Qeybta hoose ee bogga waxaad ka arki kartaa xulashooyinka ay Instagram ku leedahay mobilada.
Sawir geli. Sida biraawsarradii hore waxaad ku arki doontaa sumadda kaameerada, adoo gujinaya wuxuu furi doonaa sahamiyaha faylka. Marka xigta, waxaad dooran kartaa sawirka aad rabto isla markaana aad ugu shubtid akownkaaga.
Sidee kale ayaan sawirrada uga soo gelin karaa barta Instagram?
Waxaa jira aalado kaa caawin kara inaad sawiro ka soo gashid kambuyuutarkaaga koontadaada Instagram. Waxaana ka mid ah:
Waa aaladaha ugu badan ee loo adeegsado in lagu sawiro kumbuyuutarka 'Instagram' ee laga helo PC-ga. Waxay leedahay faa iidada ay leedahay in lagu adeegsado habka kumbuyuutareedka iyo xisaabta badan.
Faa'iido darrooyinkeeda weyn waa nooca bilaashka ah kaliya u ogolaanaya waxyaabaha la diyaarin karo maalmaha ugu horreeya ee 7. Si kastaba ha noqotee, waxay ku qoran tahay mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan.
Waxay u muuqataa inay tahay aalad wanaagsan oo aad sawirrada ugu soo dirto Instagram-ka kombiyuutarkaaga. Qalabkani ma daabici doono sawirada barnaamijyada la sameeyay, laakiin wuxuu kuu soo dirayaa digniin ama ogeysiis inaad aqbasho daabacaadda.
Nooca bilaashka ah ee qalabkan kaliya waxay u oggolaataa daabacaadaha 30 bishiiba.
Waa aalad softiweer ah oo loo sameeyay gaar ahaan kuwa raadinaya qaab kale oo ay kula wadaagaan oo ay ugu dajiyaan waxyaabaha ku jira Instagram. Kaliya waa inaad gasho, xulo sawirka, Kudar fariin oo geyso.
Qalabkaan marka lagu daro gelinta sawirada boggaga Instagram, waad tafatiran kartaa, dalagsiin kartaa, shaandhaynta goobta. Sidoo kale, waxay kuu oggolaaneysaa inaad meeleysid maamulayaasha xisaabaadka, si kastaba ha noqotee, faa'iido darrooyinka ayaa ah nooca bilaashka ah oo keliya ayaa kuu oggolaanaya inaad daabacdo maalmaha 7.
Tani waa kordhinta Google Chrome, marka waa loo baahan yahay Qalabka furaha ha rakibo Si aad u awood u yeelatid inaad adeegsato waa inaad hubisaa inuu firfircoon yahay, halkaas oo ay fududaan doonto inaad doorato nooca aaladda aad jeceshahay inaad ku dayato.
Waa aalad aad u wanaagsan, waxay kuu ogolaaneysaa inaad barnaamijyada sawirada sawir ka qaadatid, oo ka socota PC-ga, laakiin sidoo kale waxay kuu oggolaaneysaa inaad u adeegsato dalabka Android. Fududeyn jadwalka jadwalka maalmaha maalmaha usbuuca saacadaha dhexdooda.
Waxaa loo arkaa mid ka mid ah aaladaha ugu awoodda badan gelinta sawirrada, waana nooca la cusbooneysiiyay ee Schedugram. Waa qalab lacag bixin, si kastaba ha noqotee, Aad bay faa'iido ugu leedahay shirkadaha, halkaasoo aad adeegsan karto xisaabaadka 50 isku mar.
Waa aalad weyn, dhakhso leh oo fudud, waxay soo bandhigaysaa adeegsiga wanaagsan. In kasta oo ay run tahay in aanu isagu si toos ah u daabicin, haddana waxay ka digaysaa waqtiga la daabacay si loo xaqiijiyo daabacaadda.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ay leedahay ayaa ah in si otomaatig ah u doorto jadwalka halkaas oo ay ka jiraan is-dhexgal badan oo lagu daabaco. Intaa waxaa sii dheer, waxay leedahay ikhtiyaar si aad u daabacdo hashtagsyada ugu caansan.
Waa maxay faa iidooyinka faa iidooyinka gelinta sawiradaada loogu soo diro bartaada internetka 'pc'?
Ka sawirka kumbuyuutarkaaga kumbuyuutareedku wuxuu soo bandhigayaa fursado badan oo suuq geyn ah, faa'iidooyinka ugu weyn waxaa ka mid ah:
Uma baahnid taleefan casri ah: Waxay kuu oggolaaneysaa inaad si toos ah uga soo gashid sawirro kumbuyuutarka PC-ga raaxada biraawsarka.
Fudud oo qoraal ah: Dadka qaarkiis way ku fududahay in laga qoro keyboard, si ay u sharraxaan sawirrada iyo meesha ay ku leeyihiin hashtags.
Keydinta waqtiga iyo wax soo saar sareeya: Haddii aad u shaqeyso sidii Maareeye Bulsho, maaraynta xisaabaadka kombuyutarka way fududaan doontaa. Intaa waxaa sii dheer, waad kordhin kartaa wax soo saarkaaga.
Kudar xarfo gaar ah: Furaha moobaylka ayaa leh tiro xaddidan oo jilayaal ah. Haddii aad rabto inaad haysato jilayaal dheeraad ah oo khaas ah oo la heli karo si aad ugu dhejiso qoraaladaada asalka ah, adoo isticmaalaya Instagram ka kombuutarka ayaa kaa caawin doona.
Waa maxay faa'iido-darrooyinka soo-gelinta sawirada sawirradaada ku jira boggaaga 'pc'?
In kasta oo ay leedahay faa iidooyin badan si sawirro loogu soo diro Instagram-ka kombiyuutarka, isticmaaleyaashu waxay arkeen faa'iido darrooyinka qaarkood:
Furo ikhtiyaarrada horumariyaha: Waxaa jira habab badan oo ay tahay in la raaco si loo furo. Isticmaalayaasha qaarkood waxay ogaadeen inay ku adag tahay iyaga inay fuliyaan nidaamka, inkasta oo guud ahaan ay awood u yeesheen inay dhammaystiraan.
Malaha miirayaal shaandheyn ah: Noocaani uma oggolaanayo tafatirka sawiradaada, waxay qabataa oo keliya howlaha aasaasiga ah.
Wuxuu ubaahanyahay barnaamijyada tafatirka sawirka: Maadaama sawirada aan laga tafatiri karin isla isla bogga, waa in la tafatiri karaa kahor inta aan la dirin. Hawshan waa in laga sameeyaa barnaamijka tafatirka, sameyaan dhamaan isbeddelada, keydinta kadibna xir.
Talo soo jeedin si aad sawirro ugala soo baxdo pc ilaa Instagram
Galinta sawirrada Instagram waa mid aad u fudud, si kastaba ha noqotee, waxaad heli doontaa natiijooyin wanaagsan haddii aad raacdo talooyinka soo socda:
Calaamadda dhig: Mar alla markii ay suurta gasho, ku dar sumad sawiradaada. Waa inuu noqdaa mid la aqrin karo taasna ma qaadanayso boos badan oo sawirku ku yaal, waxay noqon doontaa shaabad ku taal.
Kudar Saxeex: Waxay fulin doontaa isla shaqadaas sumadda, si kastaba ha noqotee, waa ikhtiyaar aad u wanaagsan oo lagu garto sawiradaada.
Waxay ka koobantahay qaababka: Waa muhiim inaad abuurto qaabkaaga qoraaladaada. Xulashada boggagaaga gaarka ah waxay ku darsataa muuqaal shirkadeed waxyaabahaaga.
Adeegso xirmooyin: Ku darista xarkahaaga sawiradaada ama sawirradaada waxay lahaan doonaan qaab u gaar ah.
Awoodda muuqaalka sawirada: Had iyo jeer kor u soo qaad sawirada, si fiican u afji iskuday iskuna day inaad muujiso faahfaahinta ka dhigaya mid qaaska ah. Tayada sawiradaadu aad ayey muhiim u tahay waxayna ka hadashaa wax badan oo ku saabsan magacaaga, wax soo saarkaaga ama adeeggaaga.
Isku dar sawirrada: Waxaa ugufiican in la isku daro sawirada laxiriira. Haddii aadan arkin in labada sawir la iftiimin karo, mid mid daabac oo muuji.
Ugu dambeyntii, gelinta sawirrada boggaga 'Instagram' ee PC-ga ayaa ah ikhtiyaar aad u wanaagsan kuwa adeegsanaya akoonno badan. Sidoo kale, waa mid faa iido u leh kuwa ku qaata saacado badan kombiyuutarka iyo waxay doorbidaan inay halkaas wax ka qabtaan
Waxay u baahan tahay in la raaco tillaabooyinka qaarkood, si kastaba ha noqotee, guud ahaan, raacitaankooda waa wax fudud. Waxaan rajeyneynaa in hababka kala duwan ee aan soo bandhignay ay waxtar kuu yeelan doonaan adigadharka sida loo sawiro boggaga Instagram ee pc.
1 Sida sawiro looga soo guro Google Chrome
2 Sidee looga sawiraa sawirrada Mozilla Firefox?
3 Sida loo sawiro Safari?
4 Sidee kale ayaan sawirrada uga soo gelin karaa barta Instagram?
4.8 Kala bax
5 Waa maxay faa iidooyinka faa iidooyinka gelinta sawiradaada loogu soo diro bartaada internetka 'pc'?
6 Waa maxay faa'iido-darrooyinka soo-gelinta sawirada sawirradaada ku jira boggaaga 'pc'?
7 Talo soo jeedin si aad sawirro ugala soo baxdo pc ilaa Instagram
Sida loo sawiro sawirada si fudud oo fudud!
Baro sida loo xirxiro sawir Instagram ah